Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Yemen oo gudoonsiiyay shahaada sharaf xubnihii mutaystay
Jaaliyadda Yemen oo gudoonsiiyay shahaada sharaf xubnihii mutaystay
Posted by ONA Admin	/ April 27, 2013
Waxay jaaliyada dalka Yaman oo shir aad u wayn maanta isugu timid abaal marin ku gudoon siisay xubno aad iyo aad u tirabad oo abaalmarintaas mutaystay. Shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay dad aad u tirabadan oo ah bulshada qaybeheeda kala duwan ah sida Ururka Haweenka, Ururka dhalinyarada OYSU, kooxda fanka ee Horseed iyo culimada diinta ee ku nool dalka yaman iyo qaybaha kale ee bulshada oo ubaxa jaaliyadda ay hormuud ka yihiin.
Waxaa shirka lagu furay sidii hida iyo dhaqanka u ahayd halganka aayadaha quraan kariimka ah waxaan wacdi diini ah oo aad udheer halkaa ka soo jeediyay Sheekh Ismaaciil oo ah sheekh caalim ah, wuxuuna dadkii shirka ka soo qayb galay usheegay in ay Ilaahay kabaqaan, waxa guusha lagu gaadhaana ay tahay cabsida ilaahay iyo taqwada rabi ayna layimaadaaan samir iyo dulqaad. Hadii intaa la’idinka helo waxaa hubaal ah in aad cadawkiina ka guulaysanaysaan ayuu yidhi Sheekha Ismaaciil.
Intaa ka dib; waxaa lagu soo dhoweeyay kooxda Horseed oo halkaas ka soo bandhigtay heeso aad uqiiro geliyay dadkii munaasabada ka soo qayb galay. Khudbado iyo wacyigalin kala duwan ayaa laga soo jeediyay goobta.
Intaas ka dib ayaa waxaa laguda galay abaal marintii loogu talagalay qofkasta oo mutaystay in la gudoonsiiyo.
Waxayna ku dhamaatay farxad iyo rayn rayn iyo guul iyo gobonimo.